ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းလာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းလာပြီ
Posted by phone_kyaw on Jun 11, 2012 in Members, Opinions & Discussion | 16 comments
ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းလာပြီ။ အစိုးရက တပ်ကို သုံးပြီးဆိုတော့ ဒိ့ထက်ပိုပြီးအကြမ်းဖတ်လာမှာပဲ။ ကုလားဆိုတဲ့လူတွေက ရခီးတွေထက်ပိုပြီး သတ္တိရှိတယ်။ သေမထူး နေမထူး တုန့် ပြန်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ က လူနည်းစုဖြစ်နေတာကိုတော့ မေ့သွားပုံရတယ်။
နာမည်ပါပြောင်းလိုက်ပါပြီ…..“မြန်မာ့တပ်မတော်” အစား “ကလကြောက်တပ်မတော်” ဟူသတည်း………….
မပူပါနဲ ပစ်မှာပါ.. ရွှေဝါရောင်တော် လှန်ရေး တုန်းက ကုန်သွားတဲ့ ကျဉ်တွေ ကို ပြန်ဖြည့်နေရလို့ပါ…။ ကျဉ်လည်းဖြည်ပြီး ပစ်မယ်လည်း လုပ်ရော ရခိုင်ပြည်နယ် က ရိုဟင်ဂျာ ပြည်နယ်ဖြစ်သွားရော တဲ့…
အဲလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှ သနားလိုလိုမျက်လုံး နဲ့ကြည့်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ လူမျိုးစုတခုကိုမဆိုထားနဲ့ လူတယောက်ကိုသတ်ဖို့အားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအထိုက်အလျောက် ကံအကျိုးပေးခံရဦးမယ်
ခုက လိုအပ်တာလေးတွေကိုလုပ်ပေးဖို့ပါ ကုလားတွေက သူတို့ဒီအတိုင်းထိုင်နေတာကိုဘယ်တော့မှလဲကြောက်မှာမဟုတ်သလို မှုမှာလဲမဟုတ်ဘူးဆက်တိုးလာဖို့ပဲရှိတယ် ရှေ့ကအကိုညီနောင် တွေပြောသလိုပေါ့
စွတ်လုပ်လို့မရဘူး ဆင်ခြင်ရတယ် ဆိုတာလေးတွေ
မှန်ပါတယ် ဒါမဲ့ ပြတ်သားသင့်တဲ့အချိန်မှာပြတ်သားဖို့တော့လိုတယ်
ခုချိန်မှာမှ……….. ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ ပြောနေမယ့်အစား
အကြမ်းဖက် လိုသူများ ကျဆုံးကွယ်ပျောက်ပါစေ
ရခိုင်ပြည်နည်မှ မီးတောက်များ ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး
အင်း ပေါ့ပေါ့လေးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ တပ်မတော်က မပစ်ရဲဘူးလို့ ထင်နိုင်တာပါ့ ..
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မပစ်ရဲ တာလည်း၊ မပစ်သေးတာလည်းဆိုတာကတော့ …
နက်နက်နဲနဲ တွေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်..
အဘဖော တင်လိုက်တဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၇ ) ( ရိုဟင်ဂျာ ) ပိုစ့်လေးမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် …
ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ အမြန်ဆုံး ရနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျှက် …
ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် အမြင်ချင်း တူတယ် …
လုပ်တတ်ရင် အစိုးရအတွက် သိပ်လှမယ့် အကွက် …
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဖြစ်မခံနိုင်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းကဖြစ်ရပ်ကို တင်ပေးပါလား .. ဖြစ်နိုင်ရင် .. !
အများအတွက် ကိုယ့်ငွေ၊ကိုယ့်ချွှေး၊ကိုယ့်သွှေးနှင့် လက်တွေ့မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လျှင် အားလုံးကိုစိက်ဆိုးမိမှာပါ။
မိုက်တစ်လုံးနိုင်ငံရေးသမားနှင့် YCDC သိစေရန်ကို ဖွင့်ကြည့်ကြပါ။
ငမိုက်သား အစွန်းရောက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအသက်တွေနဲ့အသက်ချင်းလဲရတာမတန်ဘူး
ဂျေးမီသီချင်းထဲကလို ငါးပိရေနဲ့အမဲနှပ်တော့ ဘယ်သူကလဲမှာလဲ ဆိုသလိုပေါ့..
ဒါပေမဲ့လဲ ဒီငါးပိကောင်တွေက မြှောက်ပေးတိုင်းဂွေးတက်အောင် သွေးကြွပြီး လစ်တာနဲ့ဝင်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေ ဖြစ်နေကြရသပေါ့ဗျာ..
လစ်တာနဲ့မီးရှို့ ပြီး သွေးကြွနေတဲ့ ငပိအဆင့် ငတုန်းကောင်တွေကို အဲဒီနယ်ထဲက မောင်းမထုတ်နိုင်သေးသရွေ့နေ့ တိုင်း မကြားချင်တဲ့ သတင်းတွေ ကြားနေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..
မပူပါနဲ့။ စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်မှာတယ်(လူမျိုးခြားမပါ)
ခင်ဗျားပို(စ်)ကိုဖတ်ချင်နေတာကြာဘီ တွေ.တာကြာပေါ့ သဂျီး
နဲ.တူတယ် အပြောအဆို အရေးအသားအဆင်ပြေရင် လူတွေရဲ.အမြင်အတော်ပြောင်းသွားမှာ ;-)
ဒါမဲ့ ခင်ဗျားဘယ်တော့မှ ရခီးလို့မရေးမိစေနဲ့
ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသေသေချာချာမသိဘဲ အဲလိုမရေးမိစေနဲ့
အခု အဲဒီခင်ဗျားပြောတဲ့ လူနည်းစုကြောင့်ပဲ
ကိုဖုန်းကျော် ဆိုလိုရင်းကို လက်ခံပါတယ်..